အစာရှောင်ခြင်း Locker မျက်နှာပြင် Lock ကို app ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » အစာရှောင်ခြင်း Locker: ဦးင့်တင်ပေးဘို့နှစ်ချက်ပုတ် Lock ကိုမျက်နှာပြင်
အစာရှောင်ခြင်း Locker: ဦး Launcher ကို APK ကိုများအတွက်နှစ်ချက်ပုတ် Lock ကိုမျက်နှာပြင်
အစာရှောင်ခြင်း Locker ဦး Launcher ကို 3D များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကွက်လပ်အရပ်ပေါ်မှာရိုးရှင်းစွာအနှစ်ဆထိပုတ်ပါနဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုမသုံးဘဲသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို turn off! အကြောင်း, လွယ်ကူသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စူပါအဆင်ပြေကြောင့်ပဲ! ရုံကကြိုးစား playfully မျက်နှာပြင်ကို turn off!အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:
ဘယ်လိုအမြန် Locker သုံးစွဲဖို့ 1)?
1 ။ (သင်သေးရှိသည်မဟုတ်လျှင်) ဦး Launcher ကို 3D Install
2 ။ မြန် Locker များအတွက် Device ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုသက်ဝင်
3 ။ အလွတ်အာကာသပေါ်ဦး Launcher ကို 3D နှင့်နှစ်ဆထိပုတ်ပါစတင်ရန်
2) ငါဦး Launcher ကို 3D မျက်နှာပြင် feature ကိုသော့ခတ်ဖို့နှစ်ဆထိပုတ်ပါရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာရှိသနည်း
1 ။ အဆိုပါ settings စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ဖို့ဦး Launcher ကို 3D ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပွတ်ဆွဲ;
2 ။ မျက်နှာပြင်သော့ခတ်ဖို့တင်ပေးသူက Settings> Locker> နှစ်ချက်ကိုထိပုတ်ပါကိုသွားပါ
3) အဘယ်ကြောင့်ငါမျက်နှာပြင် feature ကိုသော့ခတ်ဖို့နှစ်ဆထိပုတ်ပါလိုအပ်သလဲ?
ဒါဟာပိုမိုမြန်ဆန်, ပိုမိုအဆင်ပြေ and Play ပါပဲ။ တဖန်သင်တို့ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ကအမြဲမလွယ်ကူပါဘူး, ကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်အတူစက်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်။ အစာရှောင်ခြင်း Locker ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ရန်အလမ်းစေမည်!
4) ဒီ feature ဟာ plugin ကိုအဖြစ်ဖြန့်ချိအဘယ်ကြောင့်နည်း
ပိုကောင်းတဲ့လက်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်, မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုနဲ့ app updates တွေကိုသီးခြား install လိုအပ်
သငျသညျအစာရှောင်ခြင်း Locker ကို uninstall လုပ်လိုက်ချင်ကိစ္စတွင် 5):
1 ။ က Settings> လုံခြုံရေး> Dev.Admin သွားပါ။
2 ။ မြန် Locker deselect
3 ။ အခုဆိုရင်သင်က uninstall နိုင်ပါတယ်CAUTION:
1 ။ ဒီ app ဦး Launcher ကို 3D များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြု, ပထမဦး Launcher ကို 3D install ကျေးဇူးပြုပြီး;
2 ။ ဒီ app စက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
မြန် Locker သင်အဆင်ပြေတတ်၏ဆိုပါက5ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးပါ! သင့်ရဲ့အားပေးမှုကိုဦး Launcher ကို 3D ပို plugins ကိုအောင်နှင့် ပို. ပင်သစ်ကိုစိတ်ကြိုက် features တွေအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလှုံ့ဆျောမည်!
အစာရှောင်ခြင်း Locker သာဦး Launcher ကို 3D အတွက်အောင်မြင်စွာလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်သင်ဤစမတ်နှစ်ချက်ပုတ် function ကိုပျော်မွေ့သည်မှန်လျှင်, C ကိုဖွင့်တင်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦး Launcher ကို 3D ပြောင်းရန်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
အစာရှောင်ခြင်း Locker ဦး Launcher ကို 3D များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကွက်လပ်အရပ်ပေါ်မှာရိုးရှင်းစွာအနှစ်ဆထိပုတ်ပါနဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုမသုံးဘဲသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို turn off! အကြောင်း, လွယ်ကူသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စူပါအဆင်ပြေကြောင့်ပဲ! ရုံကကြိုးစား playfully မျက်နှာပြင်ကို turn off!
အစာရှောင်ခြင်း Locker: ဦးင့်တင်ပေးဘို့နှစ်ချက်ပုတ် Lock ကိုမျက်နှာပြင်
2.27 ကို MB